Markab laga leeyahay waddanka Britain oo loo diiday in uu ku xirto marsada degmada Laasqoray. – Radio Daljir
Markab laga leeyahay waddanka Britain oo loo diiday in uu ku xirto marsada degmada Laasqoray.
Laas qorey July, 09 – Guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Siciid Nuur (Dabeyl) ayaa Daljir u sheegey in maantey degmada Laas qorey uu ku soo xirtey markab xaqiiqo raadin ah oo ka socdey dalka Britian, dabadeedna ay rasaas ku fureen ciidanka daraawiishta gobolka Sanaag.
Maxamuud Siciid Nuur ayaa sidoo kale sheegey in markabkaan markii hore uu kusoo xirtey dekeda Berbera, deedna ay kulamo ku yeesheen dusha sare ee markabka saraakiil ka socotey dalka Britian iyo madaxda Somaliland oo uu ugu horreeya madaxweyne Axmed Siilaanyo.
Guddoomiyaha ayaa dhica kale sheegey in ciidanka daraawiishta gobolka Sanaag ay muujiyeen in Laas qorey ay gacanta ku-hayaan ciidamo Puntland ah, taasoo ay ku muujiyeen rasaastii ay ku rideen markabkaasi, kaddib uu dib uga noqdey degmada Laas qorey.
Dabeyl, ayaa ku sifeeyay ujeedka socdaal ee markabkaan xaqiiqo raadin ku saleysan deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidamada Somaliland, waxuuna guddoomiyuhu hadalkiisa raaciyay in Somaliland ay majaro habaabineyso dawlada Britian oo ay been ka sheegeyso deegaano aysan gacanta ku heyninn.
Guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Siciid Nuur ayaa sidoo kale Daljir waxaa uu u xaqiijiyay in deegaano ka mida gobolka Sool ay joogaan wafuud ka socota dalka Britian kuwaasoo xaqiijinaya xaduudaha iyo baaxada dhulka ay Somaliland ka taliso, balse waxaa uu meesha ka saarey ineysan imaan karin wafuudaani gobolka Sanaag.
Ugu dabeyntii Maxamuud Siciid Nuur gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa sheegey ineysan ka baqeynin maamulka Somaliland inuu qabsado gobolka Sanaag, waxaase uu sheegey haddii ay faragalintu sii socoto inuu dhacayaan dagaallo sababa dhimasho iyo dhawaac badan sababtiisana ay yeelan doonto maamulka Somaliland.